सधै पढ्छु मोबाइल हेरेर भन्थ्यो छोराले जब कर्तुत थाहा पाए छोराको आमाबाबु धरधरी रोए ! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Interesting/सधै पढ्छु मोबाइल हेरेर भन्थ्यो छोराले जब कर्तुत थाहा पाए छोराको आमाबाबु धरधरी रोए !
भारतको पन्जाबमा एकजना किशोर पब्जीको लतमा यति नराम्रोसँग फसेछन् कि उनले पब्जी खेलेरै बाउआमाको २७ लाख नेपाली रुपैयाँ बराबरको पैसा स्वाहा पारिदिए । छोराले त्यती धेरै रकम पब्जीमा उडाउँदा पनि आमाबुवाले थाहा पाएनन् । समाचार अनुसार इन एप पर्चेजेज तथा अपग्रेडिङका लागि मात्र १६ लाख भारु रुपैया खर्च गरिदिए । बुवा आमाले चलाउने बैंकको एकाउण्ट पनि इन्टरनेट मार्फत पहुच बनाएका उनले त्यती धेरै रकम स्वाहा पारिदिएका हुन् । बुवा आमाको ३ वटा बैंक एकाउण्टवाट उनले पैसा सकिदिए । पब्जी मोबाइलमा लत बसेका उनले एपमै पैसा खर्चका लागि बुवा आमाको तिनैवटा अकाउन्टको प्रयोग गरे ।